ခုချိန်ထိငယ်ရုပ်လေးမပျောက်သေးပဲ နုပျိုလန်းဆန်းကာလှရက်လွန်းတဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးချော အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ ငယ်ဘဝပုံရိပ်များ – Shwe Yaung Media
ခုချိန်ထိငယ်ရုပ်လေးမပျောက်သေးပဲ နုပျိုလန်းဆန်းကာလှရက်လွန်းတဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးချော အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ ငယ်ဘဝပုံရိပ်များ
2021 | 20/11/2021 | News | No Comments
ပြည်သူချစ် သရုပ်ဆောင် နိုင်ငံကျော် ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ အပီပိုင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ ကျရာဇာတ်ကောင်တိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်ကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာ
အနုပညာလောကမှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကောင်းပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ လျှောက်လှမ်းခဲ့တာ ယနေ့ထိ တိုင်ပါပဲ။
မင်းသားချောပြေတီဦးနဲ့အေးချမ်းသာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို ထူထောင်ကာချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေနဲ့အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမှာ ဆိုရင်လည်း အိန္ဒြာကျော်ဇင် က ပြည်သူလူထုနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။
အိန္ဒြာကျော်ဇင် ဟာဆိုရင် နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာလည်း တက်တက်ကြွကြွနဲ့လမ်းမပေါ်ထွက်ကာလွတ်လပ်စွာနဲ့ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ပုဒ်မ၅၀၅ က နဲ့
ခင်ပွန်းဖြစ်သူသရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးနဲ့အတူ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ၁၈ ရက်နေ့က ပုဒ်မ (၅၀၅ က)နဲ့ အမှုဖွင့်ခံရတဲ့ အနုပညာရှင်တချို့ကို အမှုပိတ်သိမ်းကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ ထင်ရှားတဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့
အကယ်ဒမီ ပြေတီဦး၊ အကယ်ဒမီအိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့တော့ မပါလာသေး ပါဘူး။
အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို မွေးမွေးကတည်းက “… အူဝဲ အူဝဲ…. ” လို့ ပီပီသသ အသံဆာဆာနဲ့ငိုခဲ့လို့ “အူဝဲ” ဆိုပြီး အိမ်ခေါ်အမည်လေးတွင် ခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ် ပါတယ်။
မအူဝဲက အသက် 44 နှစ်ကျော်နေပေမယ့်လည်း ဖက်ရှင်ဘုရင်မအဖြစ်အားလုံးကအသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရသလို နုပျိုလှပပြီး ချစ်စရာကောင်းနေ တဲ့သူဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မအူဝဲက နုဖက်နေပြီး ငယ်ငယ်ကတည်းက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးလည်း မအူဝဲရဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းကပုံလေးမြင်တွေ့ရအောင်လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
ခုခ်ိန္ထိငယ္႐ုပ္ေလးမေပ်ာက္ေသးပဲ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းကာလွရက္လြန္းတဲ့ ထိပ္တန္းမင္းသမီးေခ်ာ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ရဲ႕ ငယ္ဘဝပံုရိပ္မ်ား
ျပည္သူခ်စ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ နိုင္ငံေက်ာ္ ထပ္ဆင့္အကယ္ဒမီ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ကေတာ့ အပီပိုင္နိုင္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ က်ရာဇာတ္ေကာင္တိုင္းမွာ အေကာင္းဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္တာေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ႀကီးေတြရဲ့ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာ ၊အျပည့္အဝရရွိထားတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
အႏုပညာေလာကမွာ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယိုဇာတ္ေကာင္းေပါင္းမ်ားစြာကို ရိုက္ကူးခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းမွာ ေလၽွာက္လွမ္းခဲ့တာ ယေန႔ထိ တိုင္ပါပဲ။
မင္းသားေခ်ာေျပတီဦးနဲ႔ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးေလးကို ထူေထာင္ကာခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ သားသားမီးမီးေလးေတြနဲ႔ေအးခ်မ္းတဲ့ မိသားစုဘဝေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူေလးလည္းျဖစ္ပါတယ္။အခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ နိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြမွာ ဆိုရင္လည္း အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ က ျပည္သူလူထုနဲ႔တစ္သားတည္းရပ္တည္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္.။
အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ဟာဆိုရင္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးရဲ့လူထုလႈပ္ရွားမႈမွာလည္း တက္တက္ႂကြႂကြနဲ႔လမ္းမေပၚထြက္ကာလြတ္လပ္စြာနဲ႔ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုပါဝင္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပုဒ္မ၅၀၅ က နဲ႔ ခင္ပြန္းျဖစ္သူသ႐ုပ္ေဆာင္ ေျပတီဦးနဲ႔အတူ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါတယ္။ေအာက္တိုဘာလ၁၈ ရက္ေန႔က ပုဒ္မ (၅၀၅ က)နဲ႔ အမႈဖြင့္ခံရတဲ့ အႏုပညာရွင္တခ်ိဳ႕ကို အမႈပိတ္သိမ္းေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမဲ့ အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ ထင္ရွားတဲ့အႏုပညာရွင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ အကယ္ဒမီ ေျပတီဦး၊ အကယ္ဒမီအိျႏၵာေက်ာ္ဇင္တို႔ေတာ့ မပါလာေသး ပါဘူး။
အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ကို ေမြးေမြးကတည္းက “… အူဝဲ အူဝဲ…. ” လို႔ ပီပီသသ အသံဆာဆာနဲ႔ငိုခဲ့လို႔ “အူဝဲ” ဆိုၿပီး အိမ္ေခၚအမည္ေလးတြင္ ခဲ့တဲ့ သူပဲျဖစ္ ပါတယ္။
မအူဝဲက အသက္ 44 ႏွစ္ေက်ာ္ေနေပမယ့္လည္း ဖက္ရွင္ဘုရင္မအျဖစ္အားလုံးကအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံရသလို ႏုပ်ိဳလွပၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေန တဲ့သူဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ ဘယ္အသက္အရြယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မအူဝဲက ႏုဖက္ေနၿပီး ငယ္ငယ္ကတည္းက အရမ္းခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးလည္း မအူဝဲရဲ့ ငယ္ငယ္တုန္းကပုံေလးျမင္ေတြ႕ရေအာင္လို႔ ျပန္လည္မၽွေဝေပး လိုက္ပါတယ္။
မြန်မာ့အရေး ဗဟိုပြုမယ့် အာဆီယံအစည်းအဝေးဆီ ဂျိုး ဘိုင်ဒင်နဲ့ တရုတ်၊ ရုရှ ခေါင်းဆောင်တွေပါ တက်ရောက်မည်
သားဖြစ်သူရဲ့ ဦးနှောက်ထဲကအကျိတ်ကို ခွဲစိတ်ကုသရန် ငွေကြေးမတတ်နိုင်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ကျောက်ကပ်အား ရောင်းချရင်း ဝင်ငွေရှာဖို့ ကြိုးစားခဲ့သည့် ဖခင်တစ်ဦး
သူမကိုယ်တိုင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ ပုတီးလေးကို ဖခင်ဖြစ်သူအံ့သြသွားအောင်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ စစ်လွန်းဝတီထက်